Core Bag ပေါ်တွင် Roll Machine ၊ Core Bag ပေါ်တွင် Roll Machine ၊ မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
ပုံစံ - STR-M-V2i Series
အော်တို-Roll Making Machine တွင် Core Bag ကိုပြောင်းပါ။(၌-လိုင်းအမျိုးအစား)
Servo feeding digital Tension ထိန်းချုပ်မှု Mechanical Co-မြန်နှုန်းစနစ်
Rotary Sealing နှင့် Perforation ကို ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး လျင်မြန်ချောမွေ့စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်စေပါသည်။,တင်းမာမှုမရှိဘဲ တံဆိပ်ခတ်ခြင်း။;ဆူညံသံနည်းပါးစွာ ပြေးလွှားနိုင်ပြီး အသက်ရှည်သော ဖောက်ထွင်းဓားကို ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။.
ဓားတိုင်းသည် အကြိမ်ပေါင်း 50000000 ကျော် အသုံးပြုနိုင်သည်။,အများဆုံး 80000000 ကြိမ်အထိ.
စိတ်ကြိုက် Perforated pitch.(ရွေးချယ်ခွင့်)
အိတ်အရှည်ကို စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂီယာအချိုးဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည်။,အရွယ်အစားတစ်ခုသည် ဤကိရိယာကို သတ်မှတ်သည်။.
လေးလံသော မော်တော်ကား ရုတ်သိမ်းရေး-OFF ၏ Edge Position Control ဖြင့် ဖြေလျှော့ပါ။-လိုင်းအမျိုးအစား.
အလိုအလျောက် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် လိုက်လာသည်။-IN ၏ feed dancing ကိရိယာ-လိုင်းအမျိုးအစား.
အပြည့်အဝထိန်းသိမ်းရန်လွယ်ကူသည်။-HMI မှ အထူးပြုလုပ်ထားသော စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်.
အလိုအလျောက်ပြန်ရစ်စက်၏ မတူညီသော core အရွယ်အစားအတွက် လွယ်ကူသောပြောင်းလဲမှု.
ပါးလွှာသော ဖလင်များအတွက် မိုက်ခရိုတင်းအားစနစ်(မိ.5 မိုက်ခရိုမီတာ)နှင့်မျက်ရည်အလွန်လွယ်ကူသည်။.
ထုတ်ကုန်များ အပြည့်လိပ်ပြီး မော်တာအစွန်းအနေအထားကို ချိန်ညှိသောအခါတွင် အလိုအလျောက် လွှင့်တင်ခြင်း။.(ရွေးချယ်ခွင့်)
ထုတ်ကုန်နှစ်ထပ်ဖြစ်နိုင်ခြေအတွက် hot slitting စနစ်ဖြင့်မျဉ်းနှစ်ကြောင်းပြန်ရစ်သည်။.(အပိုအမျိုးအစား)
လိုင်း&ကြိမ်;W x Dia. အိတ်အရှည်/
လိုင်း STR-400M-V2-A21 ၁ x ၂၃၀~375
Roll max.၁၃၀ 300~၆၀၀/
STR-500M-V2-A21 ၁ x ၃၃၀~475
Roll max.130 300~၆၀၀/
STR2-800M-V2-A22 ၂ x ၂၂၀~350
လိုင်း STR-400M-V2i-A21 ၁ x ၂၃၀~375
STR-500M-V2i-A21 ၁ x ၃၃၀~475
STR2-800M-V2i-A22 ၂ x ၂၂၀~350
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.carrybagmachine.com/my/core-bag-on-roll-machine-1.html
ငါတို့သည်သင်တို့၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ချင်ပါတယ် Core Bag ပေါ်တွင် Roll Machine ၊ ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းခြင်းနှင့်ပို့ကုန်များနှင့်လွတ်လပ်စွာကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရွဲ, ဖြန့်ဖြူး, ဝယ်လက်, အေးဂျင့်များနှင့် OEM / နှစ်ဖွဲ့န်ဆောင်မှုမှ Enquiry ကြိုဆိုဖြစ်ကြသည်။
အကောင်းဆုံး Core Bag ပေါ်တွင် Roll Machine ၊ ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် Core Bag ပေါ်တွင် Roll Machine ၊ မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ